Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): အာဏာပိုင်များက အစွမ်းကုန် ရက်စက်ယုတ်မာနေကြပါပြီ။
at 11/18/2013 10:57:00 AM
တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ကျူးကျော် အနုိုင်ယူနေသော,စစ်အစိုးရ/မုဒိန်းကျင့်တဲ့ စစ်တပ်/ခရုိုနီ နီကြေးစားလူမိုက်များကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်,လက်ပန်တောင်းတောင်ဒေသရှိ ရွာသူရွာသားများအားလုံးက တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ။
တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ကျူးကျော် အနုိုင်ယူနေသော စစ်ခရုိုနီကြေးစားလူမိုက်များက
ို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ။
လက်ပန်တောင်းတောင်ဒေသရှိ ရွာသူရွာသားများအားလုံးက သူပုန် မဟုတ် စစ်ခရိုနီကြေးစားလူမိုက်များကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ။
အာဏာပိုင်များက အစွမ်းကုန် ရက်စက်ယုတ်မာနေကြပါပြီ။ လှိုင်သာယာတွင် အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်။မကွေးမြို့နယ် မြင်းကင်းကျေးရွာ တောင်သူများ၏ လယ်ယာမြေများကို စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းခဲ့သည် ...
Fighting continued the whole night on the 17th of November 2013 in Nam Lim Pa village, Mansi township. No news available for about 200+ people who remain inside the village as well as in the forest around the village. Severe fighting still going on in Kawng Ja vilalge, about9miles to Nam Lim Pa. All the food stocks that was sent to Nam Lim Pa for 2300 persons on the 15th November are now left behind as the 1800+ villagers and IDPs already fled the village. .
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အလို မရှိ
စစ်အစိုးရ အလို မရှိ
လွှတ်တော် အလို မရှိ
တိုင်းရင်းသားပြည်သူ မကာကွယ်နုိုင် သူများ အလို မရှိ
BY - Aung Oo Pyay Chit Thu Moe Zay Nyein Tun Naing KO Han Win Aung Moe Aung San Phop Htaw Mizzima မဇ္ဈိမ Myanmartandawsint Newspaper Zaw Wonn Maung Maung Maw Tay Za Thura Zaw Win Khin Min Zaw Jasmine Black Shinn Thuza Lwin Thein Win Kyaw Kyaw Kyaw Lwin Kyaw Naing Panglai Hkrudu Nik Nayman La Nrawkawng Lwan Ni Kyaw Ni Ah Hpu N-Gun Ja Wa Maureen Nangzing Ko Than Khe Ko Myoe Ko MawPyay Myu Tsaw Mung Tsaw Myu Tsaw Brang Hugawng Kachin Hugawng Shayi Denmark Kachin Saw Kalyar Sa Maung Hkun Sa Mahkaw Chris Lachyung Mungdung La Ja Mai Lachyung Lachyung Hawng Hkawng Kai Bu Sumlut Kwe Ka Lu Moon Marip Lachid Kachin Jade Land Min Tharr Minmaha Bagan